ပူးတစ်ကောင် ရဲ့လက်ရာ: July 2008
@ ရီ(ရယ်) နည်းများ
ရေးသားသူ ကိုသက်နောင်(phoeniz) 14 အမြင်လေးတွေ
နိုင်ငံ လူမျိုးပေါင်း အများကြီး ရှိကြပေမဲ့ လုံးဝမကွဲပြား မခြားနားပဲ တူတာ လေးတွေတော့ ရှိကြပါတယ် ။
အဲဒါကတော့ ရီခြင်း ၊ ငိုခြင်း တွေပေါ့ ။ အဲဒါပေမဲ့ အဲဒီ တူတဲ့ ရီခြင်း ၊ ငိုခြင်းတွေမှာတော့ မတူတဲ့ ဟန်တွေ ရှိနေကြ ပြန်ပါရော ။ သိသလောက်..... ရီခြင်းတွေကို ပြောရရင် ( ငိုတာတော့ပြောတော့ဘူး နော...)
ဟီးဟီး ( ရှက်ကို့ ရှက်ကန်း ရီခြင်း )
ဟဲဟဲ ( မခန့်သလို ရီခြင်း )
ဟိုးဟိုးဟိုးဟိုး (နောက်ပြောင် ရီနည်း)
ဟင်းဟင်း ( ၀တ္ထုတွေထဲက ကောင်မလေးတွေ ရီခြင်း ) အပြင်မှာ အဲလိုရီတဲ့ ကောင်မလေး မတွေ့ ပေါင်
ဟတ်ဟတ် ( သူကတော့ အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ ဘလော့ရီနည်း )
ဟိ (ကောင်မလေးများ လျှပ်တပြက် ရီနည်း)
ဘူးထွားဟားဟား (အာတာလွတ်မြို့ စားကြီး ရီနည်း)
သွပ်သွပ်သွပ် ( သမိန်ပေါသွပ် ရီနည်း )
ခွိခွိ ( အစဉ်အရမ်းမိတဲ့ ရှင်ဂွမ်းဂွိ ရီနည်း )
ဟင်းဟင်းဟင်းဟင်း......(ကြာကူလီရီနည်း) ဒါက ကိုအောင်မျိုးဟန် ပြောတာ
ကဲ....ရီနည်းအသစ်လေးများ ရှိရင်လည်း ရီသွားကြပါအုံး... :) :D :p
ရေးသားသူ ကိုသက်နောင်(phoeniz) 16 အမြင်လေးတွေ
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ထိုင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို တွေ့ လိုက်တယ် ။ အမြဲတမ်း ပျော်ပျော်နေ တတ်တဲ့ ဒီကောင်ကြီးက ဘယ်နှယ့် ဒီလိုပုံဖြစ်နေရတာလဲ ။ သူထိုင်နေတဲ့ စားပွဲနားရောက်နေတာတောင် ကျွန် တော့်ကို မမြင်သေးဘူး ။ ဘာတွေများ အတွေးနယ်ချဲ့ နေပါလိမ့် ။ ဒါနဲ့စားပွဲကို "ဘုန်း" ကနဲ ရိုက်ချလိုက်တယ် ။
"ဟေ့ကောင်ကြီး ... ဘယ်သူ့ ကိုမှ မနောက်ရလို့လဒမှိုင် မှိုင်နေတာလားကွ...ဟေ"
"လခွီးတဲ့မှပဲ... လန့် လိုက်တာ ။ ဒီမှာ စိတ်ညစ်ရတဲ့ အထဲ"
"မင်းလိုကောင်မျိုးက စိတ်ညစ်တတ်သေးတယ်လား ။ ဆိုစမ်းပါအုံး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ"
"အေးကွာ...ငါ့ကောင်မလေးနဲ့ငါ့နဲ့အဆင်မပြေလို့ ကွာ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ စေတနာက ဝေဒနာ ဖြစ်တတ်ပါ လားလို့ တောင် တွေးမိတယ် ။ မနေ့ က ငါဈေးဘက် သွားရင် ပန်းလေးတစ်ပွင့် တွေ့ တာနဲ့သူ့ ကိုပေးချင်စိတ် ပေါ်မိတယ် ။ ငါသူ့ ကို တစ်ခါမှ ပန်းမပေးဖူးဘူးလေ ။ ပန်းပေးတယ် ဆိုတာ ချစ်သူတွေကြားက ချစ်စရာ အမူအကျင့်လေး တစ်ခုလို့ ငါထင်တယ်လေ"
"အေး...ဟုတ်ပါတယ်။ ပန်းပေးတာကို မကြိုက်တဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးတော့ မရှိလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်"
"အေးကွာ ... ငါလည်း အဲလိုမြင်တာနဲ့ ပဲ သူ့ ကို ပန်းပေးဖို့ညနေချိန်းထားတဲ့ နေရာကို သွားတယ်။ သူက ရောက်နှင့်နေပြီ ။ ငါက ပန်းလေးကို နောက်ဖက်မှာ လက်ကိုဖွက်ပြီး ယူလာတာ ။ သူ က မေးတယ် ။ နောက်မှာ ဘာဖွက်လာတာလဲ တဲ့ ။ ငါက "ပန်း" သူ့ ကိုပေးဖို့လို့ ပြောတော့ သူပျော်သွားပုံပဲ ။ ငါယူလာတဲ့ ပန်းလေးကို မြင် တော့ သူ အံ့ဩသွားတယ် ။ ငါက ပန်ပါလား လို့ ပြောရာကနေ ပြဿနာ စတက်တော့တာပဲ ။ မင်းစဉ်းစား ကြည့် ကွာ ။ ကိုယ်တယုတယ ယူလာတဲ့ ပန်း ၊ ချစ်သူကို ပန်စေချင်တာပေါ့ ။ သူက မပန်ဘူးတဲ့"
"အေး... ဟုတ်တာပေါ့ ။ ငါ နားလည်ပါတယ်။ ဆက်ပါအုံး"
"ငါသေသေချာချာ ပြောတာတောင် သူက မပန်ဘူး ဆိုတာချည့်ပဲ ။ ငါလည်း တင်းလာတာနဲ့သူ့ ကိုပေးမဲ့ ပန်းနဲ့သူ့ ကို ပေါက်လိုက်တာ ။ အဲမှာ တင် သူက "ရှင်နဲ့ ကျမ ပြတ်ပြီ" တဲ့ ။ အခုထိ ပြန်ချော့လို့ မရဘူး"
"ပန်းနဲ့ ပေါက်တာ လေးနဲ့ ပဲ သူက အဲလောက် စိတ်ဆိုးရရောလား ။ မမိုက်ပါဘူးကွာ ။ မိန်းမ တွေက တခါတလေ အဲလိုပဲကွ ။ ကျန်ဖန်စိတ်ဆိုးတတ် ကြတာ ။ ဒါနဲ့မင်းက သူ့ ကို ဘာပန်း ပေးတာလဲ"
@ Employee & Boss
ရေးသားသူ ကိုသက်နောင်(phoeniz) 1 အမြင်လေးတွေ
တစ်နေ့ မှာ အလုပ်သမားတစ်ယောက် က အောက်ပါစာတစ်စောင်ကို မန်နေဂျာထံ ပို့ လိုက်ပါတယ် ။
In thi$ life, we all need $omething mo$t de$perately.I think you $hould be under$tanding the need$ of u$ , worker$ who have given $o much $upport including $weat and $ervice to your company.I am $ure you will gue$$ what I mean and re$pond $oon.
နောက်တစ်ရက် အကြာမှာတော့ မန်နေဂျာထံက အောက်ပါ ပြန်စာကို လက်ခံ ရရှိပါတယ်။
I kNOw you have been working very hard. NOwadays, NOthing much has changed. You must have NOticed that our company is NOt doing NOticeably well as yet.NOw the newspaper are saying the world's leading ecoNOmists are NOt sure if the United States may go into aNOther recession.After the NOvember presidential elections, things may turn bad.I have NOthing more to add NOw. You kNOw what I mean.
@ လေးစား အားကျခြင်း
ကျွန်တော် blog လောကထဲကို ရောက်တာ ၂ လကျော်ခဲ့ ပြီပေါ့ ။ ကျွန်တော်လည်ခဲ့ ပတ်ခဲ့တဲ့ blog တွေ ၊ ကျွန်တော် လေ့လာဆည်းပူးခဲ့တဲ့ blog တွေ ၊ မျက်စိလည် လမ်းမှားပြီး ရောက်ခဲ့တဲ့ blog တွေ အများကြီးပေါ့ ။ အဲဒီ ထဲမှာ မှ ကျွန်တော် အလွန်နှစ်သက် မိတဲ့ blogger ၃ ယောက်ကို တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်နဲ့စိတ်ကူးတူလို့ ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် စိတ်ကူးကို ပီပီပြင်ပြင် ပုံမဖော်နိုင်သေးပါဘူး ။ သူတို့၃ ယောက်ကတော့ အပီအပြင် ကိုပုံဖော်ပြီး ဖြစ်နေပါပြီ။
၁။ ကို Republic
သူ့ ရဲ့အတွေးနဲ့ အရေး တွေက ဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်း မိုက်တယ်ကွာ ဆိုတဲ့စိတ်ကို ပေါ်ပေါက်စေပါတယ် ။ ပိုစ့်တိုင်းက အတွေးတွေ နဲ့ ပြည့်ဝ နေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လိုက်လို့ တောင် မမှီပါဘူး ။ လတ်တလော ရေးသားထားတဲ့ ပိုစ့်တွေ ထဲမှာ တော့ "The Mirror" ၊ "Reflection" ၊ "Bonding" ဆိုတာလေးကို အရမ်းကို နှစ်သက်မိပါတယ် ။
၂။ ကို ပီကေ
"အမေ့ကိုယ်စား" ဆိုတဲ့ ပိုစ့်ကနေ စပြီး ကိုပီကေ ကို စသိခဲ့တယ် ။ အဲမှာကတည်းက အရေးအသားကို သဘောကျ မိခဲ့တယ် ။ heart ထိအောင် ရေးနိုင်စွမ်းတယ်လေ ။ "နောက်ငါးမိနစ်လောက်" ၊ "သစ်သားဇလုံလေး" စတဲ့ ပိုစ့်တွေကလည်း တကယ်ကို ရင်ထဲကို အသိတွေ ၊ သတိတွေ ပေးနိုင်စွမ်းတဲ့ ပိုစ့်ကောင်းတွေပါပဲ ။
တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ မှာ မနိုင်းနိုင်းစနေ ကိုစသိပါတယ် ။ Blogger သက်တမ်းကတော့ နည်းတဲ့ သက်တမ်းမဟုတ်ဘူး ။ ပိုစ့်တိုင်းကို သဘောကျပါတယ် ။ ပထမဆုံး ဖတ်မိတာကတော့ "ကြည်နူးစရာ တောင်းပန်လွှာ" ။ တကယ်ကို ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ် ။ "ချယ်ရီသစ္စာ" ၊ "၉၁ မှတ်နဲ့၉ မှတ်" ၊ "မေမေတစ်ယောက်တည်းပဲ" အဲဒါလေးတွေကို ဖတ်ရတာ တကယ်ကိုဖတ်လို့ကောင်းတယ် ။ ရသ အရမ်းမြောက်တဲ့ အရေးအသားတွေ ပါပဲ ။
ထုတ်ဝေသူ တစ်ယောက်လောက် အသိရှိရင် ကောင်းမှာလို့ တောင် တွေးမိတယ် ။ သူတို့၃ ယောက်ရဲ့ပိုစ့်တွေကို ကြိုက်လို့ လေ ။ တကယ့်ကို လေးစားလောက်တဲ့ အရေးအသားတွေ မို့ ပါ ။ မရောက်ဖူးသေးရင် သွားပြီး ဖတ်ကြဖို့ဒီနေရာလေးကနေ အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော့်လို Blogger အသစ်တွေရေ ။ ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ပိုစ့်လေးတွေကို စုစည်းတဲ့ အနေနဲ့my favorite posts ဆိုတဲ့ နေရာ တစ်ခုကို google page မှာမွေးဖွားလိုက်ပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူများ သွားရောက်လည်ပတ် နိုင်ပါတယ် ။ အထက်ပါ Blogger တို့ ရဲ့ ပိုစ့်များထဲကမှ နှစ်သက်မိတာလေးတွေကို စုဆောင်းထားတာပါ။ blogspot ကို အပိတ်ခံထားရ တဲ့ သူတွေအတွက် တော့ အဆင်ပြေတဲ့ နေရာလေး တစ်ခု ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ၄ ယောက်မြောက် သဘောကျနိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါဦးမယ်ဗျာ ။
ရေးသားသူ ကိုသက်နောင်(phoeniz)0အမြင်လေးတွေ
(ကိုရှင်ရဲထွဋ် က ကျွန်တော့် တို့ ချစ်သူ နှစ်ယောက်အတွက် ရေးစပ်ထားပေးတဲ့ ကဗျာလေးပါ) ။ ဒီကဗျာလေးကိုရေးစပ်ပေးတဲ့ ကိုရှင်ရဲထွဋ် လည်း ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံး ချစ်သူ ၊ ဇနီးလေးကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေဗျာ ။
@ တောင်ကြီး သင်္ကြန် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ
ရေးသားသူ ကိုသက်နောင်(phoeniz)2အမြင်လေးတွေ
တောင်ကြီး သင်္ကြန်တုန်းက ပုံလေးတွေပါ။ ဒါကတော့ ဘယ်မှာမှ မရှိသေးတာ သေချာပါတယ်။
ကိုဇော်ပိုင် နဲ့ မမီမီ
@ မြန်မာ့အလှ လေးများ
သူတို့ တွေပေါ့ဗျာ ။တစ်ရက်နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာ တယ်။ကျွန်တော့်မှာလဲ ဖိတ်စာတွေက ဝေပြီးနေတာမို့ အရုပ်တွေနဲ့ အရင် ဧည့်ခံထားရတာ။ကဲ သူတို့ လေးတွေရဲ့ တစ်မျိုးစီလှနေတဲ့ မြန်မာ့ အလှလေးတွေကို ရှုစားဖို့ မျှဝေပေးပါတယ် ။တော်တော်များများက ရှိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ ။နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကြည့်လို့ ရအောင် ဖော်ပြပေးခြင်းပါ။
ရေးသားသူ ကိုသက်နောင်(phoeniz) 11 အမြင်လေးတွေ
ကျွန်တော့်ရဲ့Blog ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ရောက်ရှိလာကြသော Blogger ညီအစ်ကို မောင်နှမ သူငယ်ချင်း ရောင်းရင်း များခင်ဗျာ။ အခု မယ်ရွေးပွဲ ကျင်းပနေပါတယ် ... ဒိုင်လူကြီး ၀င်လုပ်ပေးသွားပါဦး ။စုစုပေါင်း (၁၀)ယောက် ရှိပါတယ်။
၁ ။ ၂ ။ ၃ ။ ၄ ။ ၅။
၆ ။ ၇ ။ ၈ ။ ၉။ ၁၀။
အဲဒီလို သတ်မှတ်ထားပါတယ် ခင်ဗျာ ။
အလုပ်တွေနဲ့မအားမလပ် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များလှတဲ့ blogger တွေအတွက် ဒီပွဲကို အကုန်အကျ အများကြီးခံပြီးလုပ်ထားပေးတာပါ ။တီးဝိုင်းအနေနဲ့ လည်း အဖြူရောင် သံစဉ်က ဖျော်ဖြေပေး ထားပါတယ် ။ အဲဒီ စေတနာ ကိုလေးစားသော အားဖြင့် ပါဝင် ဆင်နွဲပေးပါနော် ။(comment မှာရေးပေးစေလိုပါတယ်။)
ရေးသားသူ ကိုသက်နောင်(phoeniz) 13 အမြင်လေးတွေ
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး လန့် မသွားပါနဲ့ ။သိသလောက် နည်းနည်း ပြောပြမလို့ ပါ ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ် :)
ဒီလိုလေ ...မိန်းမ ဆိုတာက က အားနွဲ့ တယ်မဟုတ်လား ။ ဒီတော့ သူတို့ က အမှီအခို ရှာတယ်လေ ။ သူတို့ တွေရဲ့အမှီအခိုကတော့ အနော်တို့ယောက်ျားလေးတွေ ပေါ့ဗျာ( ကျား ဆိုမှ ကျား )။ သူတို့ တွေက တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ဘို့ခက်တယ်လေ ။မရဘူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။အောက်က စာသားလေးတွေ ကိုကြည့်လိုက်ပါလား ။ သူတို့ တွေက အနော်တို့ ယောက်ျားတွေ နားကို လာကပ်နေကြတာ :z :z :z
woMAN ### feMALE ### mADAM ### sHE ### MRs
သူတို့ က ငယ်တုန်းတော့ မကပ်သေးဘူးဗျ ။ Girl လေ Boy နားမလာဘူး ။အဲဒီတချိန်တော့ သူတို့ အနားကို ကျွန်တော်တို့ က သွားရတယ် ။
ကျွန်တော် နှစ်သက်မိတဲ့ သိထားတဲ့ အရာတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းဖို့ ၊ အများကို မျှဝေဖို့ဆန္ဒနဲ့ စာတွေ ရေးနေပါတယ် ။
ကြော်ငြာ cbox comments
1.Blogger Templates template တော်တော်များများကို စိတ်ကြိုက်ရွေးနိုင်ပါတယ်။
2.computer technology ကွန်ပျူတာ ၊ အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတော်တော်များများကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
3.myanmar Wikipedia မြန်မာ Blogger တိုင်း မဖြစ်မနေ သွားသင့်တဲ့ နေရာပါ ။
4.think global & work local ပြည်တွင်းကနေပဲ ပြည်ပနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်နိုင်စေဖို့ကြိုးစား အားထုတ်နေတဲ့ Blogတစ်ခုပါ။
5.zawgyi font add_on ဇော်ဂျီမြန်မာ font ကို Firefox မှာ Add-on အဖြစ်သုံးနိုင်ပါပြီ။ ကိုသက်ထွေးအောင် ရဲ့ ကြိုးစားမှုပါ။
6.trick & ticks ကျွန်တော်တို့blogspot သမားတွေရဲ့ဆရာကြီးပါ။ widget တော်တော်များများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
soup for the soul (2)
Forum များ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ အဖြူရောင်သံစဉ် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ပုဒုမ္မာ ဖိုရမ် Mystery Zillion သတ္တမနည်းပညာရပ်ဝန်း
Blogger သွေးချင်းများ Blue PhoenixTEARAVEN july dreamBetter TomorrowRepublicကိုပီကေ ကိုရေခါး ကိုတာယာကိုစိုးထက်လင်းဦး(စိတ်ပညာ)နည်းပညာမှတ်စုကိုပီတီ သံလုံငယ် ကိုနေမျိုးနိုင် ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် Xybo၀ိညာဉ်သစ်ပါဂနာရာမညဖိုးလပြည့်ထိပေ့သျှင်ရှမ်းကလေးစိုင်းထွန်းဝဿန်ဦးအောင်မျိုးဟန်ဟန်သစ်ငြိမ်မိုဃ်းစက် ဗိုလ်ဟိန်း ဘိုဘို မောင်သုံညရှင်ရဲထွတ်မိုးသောက်မိုးပြေးအိအိပန်းခရမ်းပြာကြယ်စင်နတ်သမီးဖူးဖူးနှင်းလေးရည်မွန်မီးငယ်ကလေးငယ်လေး
အသစ်တင်တိုင်း mail ပို့ စေချင်ရင် mail address: လေးဖြည့်ခဲ့ပါ ခင်ဗျာ
ပူးတစ်ကောင် ရဲ့လက်ရာ - Template By Blogger Clicks